သက်တန့်ချို: သဘာဝအလျှောက်ဖြစ်ပေါ်နေသော Firefall
Yosemite မှာ ဆောင်းရာသီဆိုရင် မြင်းမြီးရေတံခွန်လို့ခေါ်တဲ့ ရေတံခွန် တစ်ခုဟာ ပျောက်ကွယ်လုနီးနီးပါပဲ ။ ဖေဖော်ဝါရီရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်လောက်မှာ နေရောင်ခြည်ကျရောက်မှုကြောင့် ဒီတောင်စွန်းကနေ ဆင်းလာ တဲ့ ရေတွေဟာ ပုံမှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း မီးတံခွန် Firefall အဖြစ် လှပစွာ မြင်တွေ့နေရပါတယ် ။ နောက် ခံနေရောင်ခြည်ကနေ ရေတံခွန်ကို လှပတဲ့ မီးရောင်ရေတံခွန်အဖြစ်ပြောင်းပေးလိုက်ခြင်းပါပဲ ။
မူရင်း - Nature's Firefall : Horsetail fall
During the winter in Yosemite, coming off of El Capitan, there is an almost non-existent waterfall called Horsetail fall. During the last two weeks in February, if there is water trickling over the edge, and if it is clear at sunset ( which doesn't happen too often due to the winter storms ) the setting sun will turn this waterfall intoastream of molten fire. The waterfall lights up like molten lava due to the angle of the sun.
Posted by သက်တန့်ချို at 11:34 AM
Labels: ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အလှဆုံးနေရာတွေ, ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေ
ွှTTCT February 2, 2012 at 5:29 PM
စိုင်းကိုသူ July 16, 2012 at 12:34 PM
လွှမ်းမိုးသူ April 19, 2013 at 7:53 AM